Chrome ရဲ့ offline ဒိုင်နိုဆောလေးကို အရုပ်အဖြစ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်ပြီ – Myanmar Mobile App
Posted on March 9, 2019 March 9, 2019 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
“There is no internet connection.” ဒီစာလုံးလေးကတော့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စာလုံးပဲမလား။ ဒါပေါ့။ ဒါပေ့ါ။ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ အင်တာနက်လိုင်းပျောက်သွားတာထက်ဆိုးတာ ရှိပါဦးမလား။ အင်တာနက်မရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ။ စာဖတ်နေကြမလား။ ဒါလည်း အဆင်မပြေပြန်ပါဘူး။ Chrome ရဲ့ ဒိုင်နိုဆောပုံစံလေးပါဝင်တဲ့ error page လေးက ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေခဲ့တာ အချိန်အတော်ကြာပြီ။ ကွန်ရက်ပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတာကို အသိပေးနေခဲ့တာလည်း ကြာမြင့်နေပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့။ နောက်တစ်ပတ်ကစတင်ပြီးတော့ Chrome ဒိုင်နိုဆောလေးကို ခုံပေါ်မှာတင်ထားလို့ ရပါပြီ။
The Chrome Dino figure set celebrates 10 years of Chrome browser & everyone’s favorite(?) internet connection error code mascot! In the DZ shop starting Monday 11am EDT, $24. #chrome #dino #err_internet_disconnected https://t.co/rjBeFFPmTp pic.twitter.com/1N2DBjbHBA
— Andrew Bell, Ex-Galactic President (@deadzebra) March 8, 2019
Set လေးအလိုက်ဆိုရင်တော့ T-rex ဒိုင်နိုဆောရယ်၊ အပင်လေးပင်ရယ် ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ခုံပေါ်မှာ အလှတင်ထားလို့ အဆင်ပြေနေပါပြီ။ ဒိုင်နိုဆောလေးကတော့ သုံးလက်မအရှည်ရှိပြီးတော့ အပင်လေးတွေက နှစ်လက်မ-သုံးလက်မလောက် ရှိပါတယ်။ လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ABS ပလတ်စတစ်နဲ့ acrylic တို့ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
ထုပ်ပိုးမှုလေးကလည်း အရမ်းကိုမှ ရင်းနှီးနေတယ်လို့ခံစားရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့မြင်နေကျ page လေးအတိုင်းပါပဲ။ တစ်ဖက်မှာတော့ game over screen လေးကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ပြောရဦးမယ်။ chrome://dino ကို သွားပြီးတော့ ဆော့လို့ရနေပြီနော်။ ဒီကောင်လေးကိုတော့ မတ်လ ၁၁ရက်နေ့ ၁၁ နာရီမှာ စတင်ရောင်းချပေးတော့မှာပါ။ ဈေးနှုန်းကတော့ ၂၄ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ AP team အတော်များများကတော့ ၀ယ်ယူဖို့ စိုင်းပြင်းနေကြပါပြီ။
“There is no internet connection.” ဒီစာလုံးလေးကတော့ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံး အင်ျဂလိပျစာလုံးပဲမလား။ ဒါပေါ့။ ဒါပေ့ါ။ ဒီနခေ့တျေကွီးမှာ အငျတာနကျလိုငျးပြောကျသှားတာထကျဆိုးတာ ရှိပါဦးမလား။ အငျတာနကျမရှိရငျ ကြှနျတျောတို့ ဘယျလိုနထေိုငျကွမလဲ။ စာဖတျနကွေမလား။ ဒါလညျး အဆငျမပွပွေနျပါဘူး။ Chrome ရဲ့ ဒိုငျနိုဆောပုံစံလေးပါဝငျတဲ့ error page လေးက ကြှနျတျောတို့နဲ့အတူရှိနခေဲ့တာ အခြိနျအတျောကွာပွီ။ ကှနျရကျပွတျတောကျသှားတယျဆိုတာကို အသိပေးနခေဲ့တာလညျး ကွာမွငျ့နပွေီလို့ဆိုရမှာပေါ့။ နောကျတဈပတျကစတငျပွီးတော့ Chrome ဒိုငျနိုဆောလေးကို ခုံပျေါမှာတငျထားလို့ ရပါပွီ။
Set လေးအလိုကျဆိုရငျတော့ T-rex ဒိုငျနိုဆောရယျ၊ အပငျလေးပငျရယျ ပါဝငျမှာဖွဈပွီးတော့ ခုံပျေါမှာ အလှတငျထားလို့ အဆငျပွနေပေါပွီ။ ဒိုငျနိုဆောလေးကတော့ သုံးလကျမအရှညျရှိပွီးတော့ အပငျလေးတှကေ နှဈလကျမ-သုံးလကျမလောကျ ရှိပါတယျ။ လုပျထားတဲ့ပစ်စညျးတှကေတော့ ABS ပလတျစတဈနဲ့ acrylic တို့ကို အသုံးပွုပေးထားပါတယျ။
ထုပျပိုးမှုလေးကလညျး အရမျးကိုမှ ရငျးနှီးနတေယျလို့ခံစားရမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့မွငျနကြေ page လေးအတိုငျးပါပဲ။ တဈဖကျမှာတော့ game over screen လေးကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ဒါနဲ့ပွောရဦးမယျ။ chrome://dino ကို သှားပွီးတော့ ဆော့လို့ရနပွေီနျော။ ဒီကောငျလေးကိုတော့ မတျလ ၁၁ရကျနေ့ ၁၁ နာရီမှာ စတငျရောငျးခပြေးတော့မှာပါ။ ဈေးနှုနျးကတော့ ၂၄ဒျေါလာဖွဈပါတယျ။ AP team အတျောမြားမြားကတော့ ဝယျယူဖို့ စိုငျးပွငျးနကွေပါပွီ။